Porn၊ အသစ်တီထွင်မှုနှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါ Coolidge Effect အော်ဂဇင်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့နှေးကွေးရောငျ့ရဲနိူင်တယ်တဲ့ရှေးခေတ်ဇီဝအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် if မျိုးအောင်ခံရဖို့တောင်းစားသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှိပါတယ်။ ကခြင်းမရှိဘဲ, အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအာရုံကြောယန္တရားတစ်ခုစီကိုသစ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားဖြစ်နိုင်ခြေ-အပါအဝင်သင့် screen-အဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောမျိုးရိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းအပေါ်သူတို့အားရိပ် မိ. , သင်အစွမ်းထက် neurochemicals နှင့်အတူအရေးယူသို့ jolts ။
ကြွက်တစ်ကောင်အားကြွက်တစ်ကောင်နှင့်အတူလှောင်အိမ်ထဲသို့ကျသောအခါသင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာလိင်စိတ်နိုးထမှုရှိသည်။ ထို့နောက်အထီးတဖြည်းဖြည်းထိုအထူးအမျိုးသမီး၏တာယာများ။ သူမပိုလိုချင်ရင်တောင်သူကအလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ်။ သို့သော်မူရင်းအမျိုးသမီးကိုလတ်ဆတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်အစားထိုးပါ Presto! အဆိုပါအထီးပြန်ကောင်းလာတာကိုနှင့် gallantly fertilize ကြိုးစားနေရဆဲ ဒီမှာ။ သူနီးပါးပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ကွယ်လွန်ချိန်အထိကိုသင်လတ်ဆတ်တဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်ဤဖြစ်စဉ်ကိုသိ Coolidge Effect ထိုသို့ခဲ့ အမျိုးသမီးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလွန်း။
အဆိုပါကြွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine (က neurochemical) ၏အပွောငျးအလဲအသီးအသီးအသစ်ကအမျိုးသမီးအပြီးတတ်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇတခြားအရာအားလုံးထက်အထက်အနာဂတ်သို့၎င်းတို့၏လမ်းဖြစ်စေလိုသောကြောင့်, သဘာဝအဘယ်အရာကိုမျှမလိင်သလောက် dopamine လွှတ်နီးစပ်လာပါတယ်။ Dopamine ဖို့ကြွက်မှာထား၏ surges မဖောက်ရသေးသည့်အဘယ်သူမျှမဆန္ဒရှိအိမ်ထောင်ဖက်စွန့်ခွာ.
Dopamine သည်“ ရသင့်တယ်” ဖြစ်သည်။ အားလုံးလှုံ့ဆျောမှုနောက်ကွယ်မှအာရုံကြော။ အဲဒါမရှိရင်ငါတို့ကတရားရုံးမှာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ dopamine ပြန်လည်ကျဆင်းသွားသောအခါလှုံ့ဆော်မှုလည်းဖြစ်စေသည်။ Dopamine သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံး၌ပါသောချိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး စွဲရဲ့ ဦး နှောက် ဒီထက်အထိခိုက်မခံကြီးထွားလာ အဲဒါကိုနှင့်ထိုသို့အရှင်, ဝိရောဓိပိုအပူတပြင်း။
ပြန်ကြွက်ရန်။ နည်းတူညီတဲ့အမျိုးသမီးသည်သူ၏အကျိုးကိုခံရ circuitry squirts နှင့်လျော့နည်း dopamine နှင့်အတူအသီးအသီးသုတ်ရည်ထိအောက်ပါ။ အထက်ပါဂရပ်စဉ်းစားပါ။ တစ်ဦးကြွက်ဟာအတူ copulates ပဉ္စမအချိန် တူညီတဲ့ အမျိုးသမီးကချွတ်မရသူ့ကို 17 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဖြန့်ချိ dopamine အဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်အချိန်တိုး လျှောက်လျော့နည်း။ သူဝတ္ထုအမျိုးသမီးမှ switching စောင့်ရှောက်လျှင်, သူကအလွန်လျှင်မြန်စွာအားလုံးငါးကြိမ်သည်သူ၏တာဝန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ဦးနှောက်တစ်ခုစီကိုသစ်ကိုမိတ်ဖက်တုံ့ပြန် dopamine ၏အားကြီးသော squirts နဲ့သူ့ရဲ့ virility သက်တမ်းတိုးမည်။ *
ကြွက်မတူဘဲ, လူသားမြားသ pair တစုံ bonders များမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သားသမီးများကိုအတူတကွပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမဂ္ဂများတွင် (များသောအားဖြင့်) ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရရှိရန်ကြိုးဖြင့်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Coolidge Effect သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ ိုင်းဝန်းဝိုင်းရံပြီးတာဝန်တံပိုးများကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောသောအခါနိုးလာသည်။ တစ်ချိန်ကလော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်။ သူက ၀ န်ခံခဲ့သည်။ သူက“ ချစ်သူ ၃၅၀ ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းနေတာတစ်ခုခုရှိမယ်ထင်တယ်၊ အဲဒီအမျိုးသမီးတချို့ဟာတကယ်ကိုလှတယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း: အမွှာ Turbo အပေါ် Coolidge Effect
Online erotica သည်အသုံးပြုသူကိုမဆုတ်မနစ်ထိပါးစေနိုင်သည်။ အဆုံးမဲ့ဝတ္ထု“ မိတ်ဖက်များ” သည် dopamine များပြားလာသည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကချိတ်ဘယ်လောက်အသစ်လဲဆိုတာသတိပြုမိသည်။
ငါ porn အများကြီးစုဆောင်း။ ငါအံ့သြဖွယ်အပျော်အပါးအချို့ဒေတာဘေ့စစုဆောင်းခြင်းခဲ့သည်ထင်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းသစ်ကိုကြယ်, ဝတ္ထုဗီဒီယို, ဝတ္ထုလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အခါကြွက်များနှင့်လူသားများသည်ကွာခြားမှုမရှိကြောင်းပြသသောလေ့လာမှုများစွာကဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါ သြစတြေးလျသုတေသီများ ထပ်တူထပ်မျှလိင်တူချစ်သူရုပ်ရှင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြသခဲ့ပြီး၊ စမ်းသပ်သူများ၏အပြစ်ဒဏ်များနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်အစီရင်ခံစာများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှုန်းတိုးတက်မှုကျဆင်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအတူတူပင်ဟောင်းသည်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည် (dopamine ကျဆင်းခြင်းကိုညွှန်ပြသည့်အလေ့အကျင့်) ။
သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းဝတ္ထု pornstar မှ masturbating ကြောင်းလေ့လာသင်ယူကြပါပြီ သုက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုးတိုးပွါး (အကျွမ်းတဝင်မင်းသမီးမှ masturbating နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) ။ ထို့အပြင်သုတ်ရည်လွှတ်သည့်အချိန်သည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းဟာပိုကောင်းတဲ့သုတ်ရည်နဲ့ပိုမြန်တဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ မည်သည့်“ အပိုစုံတွဲဖက်မှု” ကိုမဆိုပိုမိုထိရောက်စေတယ်၊ နှင့် ပိုပြီးအကုန်အကျ။
Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလက်တွဲဖော်အသစ်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ Dopamine သည် ၀ တ္ထုတစ်စုံတစ်ခုအတွက်အထူးသဖြင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်မြင့်တက်လာသည်။ သုတေသနဖြစ်သည့်အကြောင်း ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းများမျှော်လင့်ထားသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးခြေလက် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အချင်းချင်းအားဖြည့်ပေးသည်။ သင်၌လိင်အလုံအလောက်ထက်မကရှိခြင်းကို ဦး နှောက်၏အစိပ်အပိုင်းကဂရုမစိုက်ပါ။ ကမျိုးရိုးဗီဇရလဒ်များကိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Sooty တစ် ဦး အထီး guinea ဝက်နှစ်ဆယ်လေးအမျိုးသမီးတစ်ဦးလှောင်အိမ်သို့ချိုးဖဲ့။ သူကဖမ်းမိပြီးနောက်ရက်ပေါင်းသူ knackered ဖြစ်ခဲ့သည်။ (အခြားကြွက်အပေါ်သုတေသနဦးနှောက်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူခန့်ကြာကွောငျးဖျောပွသ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး, လူသားအပေါ်သုတေသနပြုကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသ Post-သုတ်ရည်လွှတ်သံသရာ ကအနည်းဆုံးခုနစ်ရက်ပတ်လုံး၏။ )
Sooty ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇသော်လည်းပျော်ရွှင်ကြ၏ သူသည်ဝက်ဝက် ၄၂ ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းများသည်တစ်ချိန်ကမျိုးစိတ်အားလုံးရှိအမျိုးသားများအတွက်ရှားပါးသည်။ သို့သော် Coolidge Effect သည်အခါအားလျော်စွာပေါ်ပေါက်လာသင့်သည်နှင့်အမျှအမျိုးသားများသည်သူတို့၏သဘာဝကန့်သတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုပြီး၎င်းတို့ကျဆင်းသွားသည်အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အထီးဖို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အာနိသင် recover dopamine / novelty နှင့်အတူသူတို့၏လိင်မှုအရရောနှောမှုယန္တရားများကို overrating ပြီးနောက်အားစိုက်ထုတ်ခြင်း။ သို့သျောလညျးဒီနေ့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း ဘယ်နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုယန္တရားများကို overrating လုပ်နေကြတာလဲ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ပတ်တာကြာအောင်အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်းမရှိဘဲ? မြေသြဇာကျွေးမွေးရန်သွေးဆောင်ခံရသည့်“ အိမ်ထောင်ဖက်” နောက်တစ်ခုအမြဲရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုသုံးခြင်းမှထွက်ခွာသွားသည် တစ် ဦး unnerving "flatline တွေ့ကြုံခံစား။ " သူတို့ဓာတ်ငွေ့ကိုသူတို့ခြေဖဝါးမှဖယ်လိုက်သည်နှင့်သူတို့၏ libido သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသည့်အထိအိပ်မောကျသွားသည် - Sooty ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအလွန်အမင်းပုံစံ။
Dopamine သည်အသစ်အဆန်းကိုတုံ့ပြန်ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုခုကပိုနှိုးဆွသောအခါ မျှော်လင့်ခြင်းထက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit သည် dopamine နှင့်အရူးကဲ့သို့သောမီးများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အမြဲတမ်းမမျှော်လင့်သောအရာများ၊
ဆနျ့ကငျြ, သင့်ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသည်ထက်အမြဲကောင်း၏။ မအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးပူဇော်ထားဘူး။ ဒါဟာတခြားမျိုးကမ်းလှမ်း ပိုပြီးပွော့ဆုလာဘ်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာသင်၏ ဦး နှောက်၏မူလအစိတ်အပိုင်းသည် dopamine ပမာဏသည်လုပ်ဆောင်မှု၏တန်ဖိုးနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်းယူဆသည်။
အောက်ဆုံးလိုင်း: အလွန်အကျွံဒြပ်ဆွ အအေး oatmeal ကဲ့သို့သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကြည့်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2007 လေ့လာချက်, sexy အမျိုးသမီး၏ရုပ်ပုံများကိုတစ်စီးရီးမှမျှသာထိတွေ့တစ်ဦးသောသူသည်မိမိကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်တနျဘိုးလြော့စေရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူကဆွဲဆောင်မှုအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းနွေးထွေးမှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်သာအနိမ့်သူမ၏ rates ။ တစ်ဦးအတွက်ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်များ 1988 လေ့လာချက် မိတ်ဖက်၏ချစ်ခင်မှု၊ အသွင်အပြင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအပါအ ၀ င်သူတို့၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အားစိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကပင်နွေးထွေးသော၊ လက်ခံတတ်သောအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိင်သည်စေးကပ်သော Playmate ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (dopamine) ထက်ယေဘုယျအားဖြင့် dopamine ကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ Miss July ကိုစေ့စပ်စွာ“ မြေသြဇာကျွေးခြင်း” ခံရပြီးနောက်သူမသည်သူမ၏ airbrush curves မှ dopamine ထိခိုက်မှုနည်းသည်။ Miss သြဂုတ်လအတွက်သင်စောင့်ရတယ်။ ထိုအခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူစတိုးဆိုင်များလာ၏။ ဗွီဒီယိုအသစ်ကိုယူရန်အချိန်မတိုင်မီတွင်သင်သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုပင်အကြိမ်မည်မျှရနိုင်မည်နည်း။ (porn အတွက်ငွေပေးချေခြင်း၊
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်မောက်စ်ကိုကလစ် နှိပ်၍ အဆုံးမဲ့မီးရှူးမီးပန်းများကိုပူဇော်သည်။ သင် (နောက်ထပ် dopamine ထုတ်လွှတ်သည့်လှုပ်ရှားမှု) ကိုနာရီများစွာအမဲလိုက်နိုင်ပြီးတစ်သက်တာတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောသင့်မုဆိုးစုဆောင်းသည့်ဘိုးဘေးများထက် ၁၀ မိနစ်တိုင်းတွင်အသစ်သောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ dopamine hit ပြီးနောက် dopamine hit မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ပြောင်းလဲပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ (ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းသည် ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine အလွန်အကျွံပျံ့နှံ့နေသဖြင့်၎င်းသည်မြင့်မားသည်။ ) ၎င်းသည်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်သင့် ဦး နှောက်၏ပုံမှန်လိင်စိတ်နိုးထစေသောယန္တရားများကိုကျော်လွှားရန်လုံလောက်သည်။
ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ခဲ့ကတည်းကငါငြိမ်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များမှ masturbating ပါပြီ။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်6လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသည်အထိ ED နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူး။ အဆိုပါပြဿနာကိုအခမဲ့ streaming ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သကဲ့သို့ငါသည်ကိုင်တွယ်နိုင်သလောက်ကြည့်ရှုရန်လွှမ်းမိုးသောရရှိနိုင်မှုရှိပါတယ်။ ငါသာ porn မှ masturbating ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွရ, ငါ့ဦးနှောက် rewiring တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံး4နှစ်ပေါင်းတစ်အံ့သြစရာ, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းမနှင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ငါ့လိင်စိတ်အတွက်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခြင်းနှင့်ပညာရေးအတွက်မြင့်တက်သတိထားမိပါပွီ။
“ porn သည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရမည်။ အသစ်အဆန်း၏ ဦး နှောက်အပေါ်အစွမ်းထက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်ပြီးသည်နှင့်သို့သော်ဤပြောဆိုချက်သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိ။ ယနေ့ ၂၄/၇ ကန့်သတ်မဲ့အမျိုးအစားများရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏လိင်စိတ်ကိုအလိုအလျောက်ဖျက်စီးရုံမျှသာပြုသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ကိုဝေးသွားစေတယ် ကျော်လွန် ကြောင်းအစာစားချင်စိတ်-ဖြစ်ကောင်းကံဆိုးအကျိုးဆက်များအတူ။ အခြို့သောအဘို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှ masturbating လိင်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာ:
ဝေးမယ့်အနေဖြင့် "ချွတ်ပွတ်တိုက်," ကျနော်တို့နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယေဘုယျအားဖြင့် "ကျနော်တို့ကိုခေါ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံedgingသန္ဓေတည်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီပေါင်းများစွာစာသားအရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အင်တာနက်အုပ်စုများတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည် တဦးတည်း၏အက Moderator.
အို! အမျိုးအနွယ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နှင့်သူတို့၏ဗီဇအမျိုးမျိုး porn အသုံးပြုသူများအမောင်းနိုင်ပါတယ်တွက်ချက်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယန္တရား ကွာ အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ? မှန်ပါသည်, ယန္တရား dopamine များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လို့ပဲ။ သင့်ဦးနှောက်တစ်ခုခုသင်အမှန်တကယ်ပူရရှိသွားတဲ့လျှင်, (နောက်ကျောနေ့, များအတွက်အန္တရာယ်ရှိအန္တရာယ်များကိုယူပြီးပင်တန်ဖိုးရှိ) ရိုးရိုးသားသား-to-ဘုရား fertilization အခွင့်အလမ်းဖြစ်ရှိကြောင်းယူဆတယ်။
Coolidge Effect က“ ယောက်ျားတွေနိဂုံးချုပ်ဖို့” ဦး ဆောင်နေသလား။
Coolidge Effect ရဲ့လျှို့ဝှက် ဦး နှောက်ယန္တရားကိုသင်နားမလည်ပါကသင့်အားလုံလောက်သောပမာဏရှိသည့်တိုင်အောင်ပင်ဓာတ်ငွေ့ကို ၀ င်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒီထက်တုံ့ပြန်မှုကြီးထွားလာ dopamine Overload ကြောင့်။ သင့်ရဲ့လိင်စိတ် insatiable ဖြစ်ပါတယ်တူသောပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးမှာပိုပြီး porn ၏အစွမ်းထက် aphrodisiac တူခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေအနေကဝိရောဓိဖြစ်ပါသည် အဖွေ မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဒုက္ခများရန်။
အဖြစ်မှန်သို့သော်ဦးနှောက်အတွက်နက်ရှိုင်းသော neurochemically-သွေးဆောင်မကျေနပ်မှုကောင်းစွာပိုပြီးဆွရှာသင့်ရဲ့တိုက်တွန်းပိုဆိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လိင်စိတ်အပူထိန်းကိရိယာပွုပွငျပွောငျးလဲခဲ့သတဲ့သဲလွန်စကိုသင်ကျန်းမာစိုက်ထူ get သို့မဟုတ်ပိတ်ရဖို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်, ကျောနေ့, ယောက်ျားတွေကိုအလွယ်တကူနှင့်အတူအထွတ်အထိပ်မှ masturbated အဘယ်သူမျှမ porn ။ )
အခြားလက္ခဏာများမှာမငြိမ်မသက်မှု၊ စိတ်နာကျင်မှုနှင့်မကျေနပ်မှုများ၊ kinkier sex ကိုလိုချင်ခြင်း၊ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအင်တာနက်ထက်ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများကိုခေါ်သည်းခံနေခြင်း။ " သူတို့က ဦး နှောက်ထဲမှာအလုပ်မှာစွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ, ဒီစောင့်ကြည့် ငါးမိနစ်ကို TED ဟောပြောပွဲ 'ယောက်ျားတွေရဲ့နိဂုံးလား' ကျော်ကြားလှသည့်စိတ်ပညာရှင် Philip Zimbardo မှ“ arousal စွဲ” သည်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနေသူတ ဦး က၊
ဒီဗီဒီယိုမှာသူပြောတာတွေအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်သွားပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုလျော့နည်းလာသည်။ ငါကလိမ္မာပါးနပ်သောပြက်လုံးများကိုအက်ကွဲ။ ငါပြောသောအရာကိုမစဉ်းစားဘဲအခြားသူများမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့ပြောဆိုသည်။ ငါတည်ဆောက်ထားသည့်နံရံများအချို့ပြိုလဲနေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံမှုသည်လည်း ပို၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်လာသည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့ဗွီဒီယို
ပြofနာအတော်များများဟာလှပပြီးအသစ်စက်စက်မောင်းနှင်တဲ့ Coolidge Effect - သဘာ ၀ ရဲ့သုတ်သင်မှုကိုလက်ခံတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေ ၀ င်နေရင်၊ သင်ကလုံလုံလောက်လောက်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ရင်တောင်မှသင့်ရဲ့တာဝန်ကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့သဘာဝရဲ့နှင်တံနဲ့စတင်ပါတယ်။ သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသော၊ သင်၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ dopamine အများဆုံးထုတ်လွှတ်သော option ကိုရယူရန်သူတို့သည်သင့်အားအလိုအလျောက်တိုက်တွန်းပါသည်။ e-hottie ကလက်မခံသည့်အခါသင့် ဦး နှောက်သည်မျိုးရိုးဗီဇပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ၀ င်နေသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ၎င်းသည်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည် သငျသညျ.
* ပထမဦးဆုံးဂရပ်ရှိဒေတာထက်မသာကြွက်-ဒီတော့သိုးထီးအစားပုံရပါမည်, သိုးထီးအပေါ်သုတေသနကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုလည်းကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။
နယူး: Novell အမျိုးသမီးပုံများ (2015) ကိုဖော်ထုတ်ခံရသည့်အခါလူတို့သညျပိုလျင်မြန်စွာ Semen ၏ပိုကြီးသော Volumes ကို Ejaculate ပိုမို Motilal သုက်ပိုးများနှင့်
Porn Users in Escalation (နှင့် Habituation) ရှာဖွေခြင်းစာရင်း